आईतबार, मंसिर २१, २०७७ Sarangi Radio Network
गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालको अध्यक्षमा पुनःगौरी तमू, महासचिवमा रोशनी गुरुङ
ओलीकाे अड्डी पछि नेकपामा सांसदको अंकगणित शुरु, प्रचण्ड र ओली कुन गुट कति बलियाे ? नामावली सहित
सचिवालय बैठकमा क्रममा, नेकपाकाे विवाद झन् चरममा : ओलीले दुवै पद नछोड्ने
जागाैं नेपालकाे केन्द्रिय भेलाकाे तयारी तिब्र, कास्कीमा समिती गठन
गणतान्त्रिक नेपालमा राजतन्त्रकाे माग : काठमाण्डाै प्रदर्शनमा बालुवाटारकाे माैन सर्मथन ?
मेलिना राई र सौगातजंङ थापाको 'मैले गर्ने माया' सार्वजनिक (भिडियो)
हेलाे सरकार ! मजदुरले गरी खान्छु भन्दा काेराेना लाग्ने, नेताले जुलुस निकाल्दा नलाग्ने ?
कोभिडकै बिच पनि रुपामा विकासका काम नरोकिने
सरकारले गोप्य राखेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन एक्कासी सार्वजनिक भएपछि... के थियाे प्रतिवेदनमा ?
काँग्रेसकाे सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको घोषणा, यस्ता छन् कार्यक्रम...
जीवनशैली विचार समाज
आईतबार, कात्तिक ३०, २०७७ सारङ्गी न्युज
टाढाकी चेलीलाई भनेर...
मसँग एउटा पुरानो ढाका टोपी छ । परारको साल दिदीले तिहारमा मेरो शिरमा थमाइदिएकी हो यो । त्यसको भित्री कपडा फाटिसकेको र बाहिर पनि अलिकति उध्रेको छ । तर जबजब म यो टोपी पहिरेर हिँड्ने गर्छु, लाग्छ मेरो शिर कैलाश हिमालजस्तो चुलिएर आउँछ । मेरो चेहरामा आग्नेय तेज पैदा हुन्छ । मेरो ओठमा अलौकिक मुस्कान आएर बस्छ । मभित्र प्रचण्ड उर्जा प्रादुर्भाव हुन्छ । म अजेय अवतारमा रवाफिलो माइती प्रकट हुन्छु । मेरी प्यारी चेलीले खुत्रुकेको एकएक रुपैयाँ जोडेर कति अभावका बिच किनिदिएकी हुँदी हो १ तर जबजब म यो टोपी पहिरन्छु । लाग्छ सबसे अमीर त मै हुँ । सबसे भाग्यशाली त मै हुँ । मलाई कहिल्यै यो टोपी सस्तो लागेन । मलाई कहिल्यै यो टोपी थोत्रो लागेन । मलाई कहिल्यै मेरी चेली गरीब लागेन । मलाई कहिल्यै म आफू गरीब लागेन । मसँग यही एउटा पुरानो ढाका टोपी छ । मसँग एउटा आलो स्मृति छ । मसँग मेरी चेली छे । मसँग एउटा सिङ्गो श्रृष्टि छ ।
दिदी, तैँले मेरो निधारमा दलिदिएको सेतो रङले तँ र मबिच पवित्र स्नेहको लक्ष्मणरेखा म कोर्छु । उहिल्यै मैले राजधानी छोड्दा तँ कसरी भक्कानिएर रोइस् । मैले देश छोड्दा हामी कसरी भक्कानिएर रोयौं । यति लेखिरहँदा मेरा आँखाहरु कोसी भएर तेरो सम्झनाका भङ्गालाहरु छिचोल्दै वियोगको महासागरमा डुबिरहेछन् । म यतिबेला भक्कानिएर रुन सक्दिनँ । तैँले भाइटीकामा निधारमा रङ्गाइदिएको त्यो सफेद रङले तेरो पवित्र मायाको कठघरामा मलाई खडा गरेर भनिरहेछ जिन्दगी, तँ र मबिच यो पवित्रताको साइनो कुनै वैमनश्यले नपखालोस् । कुनै द्वेषले नबढारोस् । कुनै आशक्तिले नखिँचोस् । कुनै पूर्वाग्रहले नसिँचोस् ।
म याद गरिरहेछु त्यो पुरानो भाइटीका । तैँले टीका लगाइदिने बेला म अनायास डाँको छोडेर रोएँ । म रोएको देखेपछि तँपनि मसँगै रोइस् । हामी आआफ्ना बाध्यताहरुको दास भएर रोयौं । हाम्रा आँशुहरु एकअर्कामा समर्पित भएर वर्षायामको खहरेमा परिणत भए । कति समान थिए हाम्रा भावनाहरु । कति निकट थिए हाम्रा वेदनाहरु !
तैँले हाम्रो साइनोलाई साक्षी राखेर निधारमा कोरिदिएको रातो टीकाले तेरो निश्चल हृदयबाट मप्रति पलाएका अपेक्षाका पुञ्जहरु प्रतिबिम्बित हुन्छन् । जिन्दगीका कठिन घनघस्याहरु छिचोल्न तैँले दिएको आशिषलाई शिरोपर गर्दै सार्थक बनाउने कोशिश गर्दैछु आज, तेरै अभिलाषाहरु, तेरै शुभेच्छाहरु । तर तैँले सोचेजस्तो, तैँले चाहेजस्तो माइती म भइनँ सायद । अनुज म रहिनँ सायद । तथापि तँलाई साक्षी राखेर लड्दैछु किस्मतका अनवरत युद्धहरु । छिचोल्दैछु सफलता र असफलताका अनगिन्ती भङ्गालाहरु । तेरै शुभाशिषका प्रतिफलहरु हुन् यी, मभित्रका जति पनि आत्मविश्वासहरु । मभित्रका जति पनि सृजनाहरु । मभित्रका जति पनि सफलताहरु । मभित्रका जति पनि महत्वाकांक्षाहरु ।
तँ मसँगै पढिस् । तँ मसँगै हुर्किस् । तँ मसँगै खेलिस् । तैँले एकपटक खेदाउँदा ढोकाको चुकुलले कोतरेको दाग तेरो चिनोसरि अझै मेरो देब्रे नारीमा छ । मैले ओछ्यान मुत्दा तैँले तन्ना धोएको दृश्य स्मृतिमा सजीव छ । तँ र म सधैँ साथी भयौं । तँ मेरो साथी, म तेरो साथी । हामी एकअर्काका परिपूरक साथीसाथी । म भाइ भएर पनि तेरो साथी हुन सकेँ । तँ दिदी भएर पनि मेरो साथी हुन सकिस् । यो हिमशैल झैँ शालिन हाम्रो मित्रतालाई चिरञ्जीवी आयु दिनलाई तैँले मेरो निधारमा रङ्गाइदिएको गुलावी रङ, नछोइएको, नचुँडिएको कुनै गुलावको फूलजस्तो कति कञ्चन १
मेरा असफलताहरुमा तैँले दिएका सान्त्वनाहरु । मेरा अकर्मण्यताहरुमा तैँले सुम्पेका प्रेरणाहरु हरित उद्यान बनेर मनमा नाचिरहेछन् । जसरी मेरो खुसीको नाममा तैँले आफ्ना कति खुसीहरुलाई खुसीखुसी तिलाञ्जली दिइस् होला । तैँले मेरो जिन्दगीमा पोतेका खुसीका अनगिन्ती मूर्तअमूर्त चित्रहरु छन् । तेरा तिनै कलाहरुको पारखी म । आज दूरदराजमा तैँले परारको साल हरियो रङले रङ्गाइदिएको त्यही खाली निधार लिएर अहिले आफ्नो खुसीको फैसला म आफैँ गर्न सिक्दैछु । तँ त मेरो गुरुपनि भइछस्, हेर् १
मलाई नीलो रङ मन पर्छ । जसरी मलाई तँ मन पर्छ । जसरी हामी एक अर्कालाई मन पराउँछौं । यो हाम्रो आत्मीयताजति गहिरो पुरै ब्रह्माण्डको गहिराइ छैन होला । हाम्रो यो गहिरोभन्दा पनि गहिरो सम्बन्धका साक्षीहरु धेरै छन् । हामी जन्मेको घर । हामी खेलेको आँगन । हामी पढेको स्कुल । हामी स्कुल पढ्दा बसेको डेरा । हामी हाँसेको पल । हामी रोएको पल । हामी छुटेको पल । यिनै साक्षीहरुलाई साक्षी राखेर तैँले रङ्गाइदिएको नीलो रङ जिन्दगीको गहिराइजत्तिकै गहिरो भएर मेरो निधारमा टाँसिएको छ ।
तैँले ममा सिकन्दर देख्न चाहिस् होला । तेरो भाइ जिन्दगीका आरोहअवरोहमा सधैँ अविजीत रहोस् भनेर मेरो कदमकदममा गरेका तेरा प्रार्थनाका मन्त्रोच्चारणहरुलाई मैले कत्ति नजरअन्दाज गरेँ होला । सनैसनै जिन्दगीलाई बुझ्दै गएँ । मैले तँलाई बुझ्दै गएँ । तेरो अन्तस्करणमा मेरो भविष्यको भीमकाय कल्पतरु झाँगियो होला । त्यही भविष्य आज वर्तमान भएको छ । अब पो बल्ल बुझ्दैछु, तैँले निधारमा रङ्गाइदिएको बैजनी टीकाको महात्म्य कति रहेछ १ जिन्दगीको परमानन्द भनेकै, जिन्दगीको जीत भनेकै आफू भोको बसेर पनि अरुको पेट भर्नु रहेछ । बैजनी त तैँ थिइस्, विजेता त तैँ थिइस् । आफू रित्तोरित्तो भएर पनि मलाई भरिरहिस् । तैँले निधारमा रङ्गाइदिएको बैजनी रङ तेरै त्यागहरुको प्रतीक हो । र त तँलाई सम्झेर आज म बैजनी आँशु झारिरहेछु ।
तेरो भाइ संसारकै उत्कृष्ट भाइ होइन । यो बुझेर पनि तैँले नबुझे झैँ गरेकी हो कि । या यथार्थमै तँभित्र यस्तो विश्वास छ कि । तैँले उत्प्रेरणाका मिठा शब्दहरु बोल्दा म आफूभित्र सम्भावनाका असङ्ख्य कोहिनुरहरु देख्छु । मैले नदेखेको मलाई तैँले देख्छेस् । मैले नचिनेको मलाई तैँले चिन्छेस् । आफ्नै अस्तित्वको खोजी गर्दै दुनियाँलाई आफ्नो बारेमा सोधिहिँड्दा केवल तँ थिइस् जसले मलाई म को हो भनेर चिनायो । मेरो आत्मविश्वासभन्दा कयौँ गुना ठुलो तेरो मप्रतिको विश्वास । त्यही विश्वासको प्रतीकस्वरुप तैँले निधारमा पोतिदिएको सुनौलो रङ आज मेरो जिन्दगीको कार्यभार बनेको छ । मलाई यसरी नै दिलाइरहनू मेरै परिचय । मलाई यसरी नै चिनाइरहनू मेरै प्रतिबिम्ब । ताकि कुनै दिन म तेरो विश्वासप्रति खरो उत्रन सकूँ । म तेरो सपनालाई यथार्थमा परिणत गरुँ ।
तैँले गलामा लगाइदिएको मखमली मालाको दामसम्म उठ्न नसक्ने लज्जास्पद भेटी दिएँ होला मैले । तर मेरो चिरायुको कामनामा तैँले उनेका मखमली फूलहरु साक्षी छन् । कसरी जन्मौँजन्म हामी दुई यसरी नै चेलीमाइती हुन पाऊँ भनेर जलिरहेको दीयोमा हत्केला राखेर तेलको घेराबिच भाकल गरेकी थिइस् । तैँले उनेको मखमली फूलको मालाको कसम, सयौँ जन्म तेरै माइती भएर तेरो गुन तिर्न म जन्म लिइरहनेछु ।
तैँले मलाई खुवाउन फोरेका ओखरहरुले मेरा सारा बाधाहरु हटाउने यत्न गर्छन् । तैँले पिलाएको कलशको जलले म जिन्दगी जिउनुको सार्थकता बुझेर तृप्त हुन्छु । तैँले खुवाएको सेलरोटीभन्दा मिठो परिकार यो दुनियाँको अरु कुनै पनि भान्छामा बन्दैन । तेरो हातले खुवाएका परिकारहरु यो दुनियाँको अर्को कुनै हातले बनाउन सक्दैन । त्यसैले त जन्मौँजन्म तँलाई नै चेली पाऊँ भनेर टीका थापेपछि तेरो गोडा ढोग्ने बेलामा मैले पनि मनमनै प्रार्थना गरेँ, मनमनै कामना गरेँ ।
आजको दिन तेरा लागि मसँग शब्दको नागबेलीबाहेक उपहारमा पठाउन अरु केही छैन । तर मेरी प्यारी दिदी, मलाई यकिन छ मेरा यी भावनाहरुको महत्व तेरा लागि तेरो आफ्नै मुटुभन्दा बढी छ । यसरी नै माया गरिरहनू मलाई । यसरी नै साथ दिइरहनू मलाई । यसरी नै भरोसा दिइरहनू मलाई । ताकि तँसँगको यो पवित्र सम्बन्ध यो श्रृष्टि रहेसम्म रहिरहोस् ।
दूरदराजबाट मेरी प्यारी चेलीलाई भाइटीकाको न्यानो शुभकामना !
आईतबार, कात्तिक ३०, २०७७, १७:३२:००
कडा बढ्यो जाडो, कसरी आफुलाई स्वस्थ राख्ने त ? यस्ता छन् उपाय
जाडोयाममा चायाँबाट कसरी छुट्कारा पाउने ?यसो गर्नुहोस्
गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालको अध्यक्षमा पुनःगौरी तमू, महासचिवमा रोशनी गुरुङ ८ घण्टा पहिले
जागाैं नेपालकाे केन्द्रिय भेलाकाे तयारी तिब्र, कास्कीमा समिती गठन प्रकाश अधिकारी
कोभिडकै बिच पनि रुपामा विकासका काम नरोकिने रुपिन्द्र प्रभावी
विश्वकै साहसिक काम ढोरपाटनमा नाउरकाे शिकार, अहिले सम्म कति गरियाे शिकार ? सारङ्गी न्युज
ओलीकाे अड्डी पछि नेकपामा सांसदको अंकगणित शुरु, प्रचण्ड र ओली कुन गुट कति बलियाे ? नामावली सहित ९ घण्टा पहिले
सचिवालय बैठकमा क्रममा, नेकपाकाे विवाद झन् चरममा : ओलीले दुवै पद नछोड्ने ९ घण्टा पहिले
गणतान्त्रिक नेपालमा राजतन्त्रकाे माग : काठमाण्डाै प्रदर्शनमा बालुवाटारकाे माैन सर्मथन ? १२ घण्टा पहिले